Aluminium Ucwecwe fiberglass Indwangu Abakhiqizi & abahlinzeki - China Aluminium Ucwecwe fiberglass Indwangu Factory
Indwangu ye-Aluminium Foil fiberglass engangenamlilo
Indwangu ye-Aluminium Foil fiberglass engangenamlilo i-aluminium foil kanye nendwangu ye-fiberglass yendwangu ehlanganisiwe. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
Aluminium Ucwecwe laminated fiberglass Indwangu
Aluminium Ucwecwe Laminated fiberglass Indwangu kuyinto aluminium ucwecwe futhi fiberglass indwangu impahla ehlanganisiwe. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
Indwangu ye-Aluminium Camera fiberglass iyicwecwe le-aluminium nendwangu ye-fiberglass yendwangu ehlanganisiwe. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
I-fiberglass Aluminium yicwecwe le-aluminium nendwangu ye-fiberglass yendwangu eyakhiwe. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
I-Aluminium fiberglass i-aluminium foil nezinto ezenziwe ngendwangu ye-fiberglass. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
Indwangu ye-fiberglass ye-aluminized i-aluminium foil kanye nendwangu ye-fiberglass yendwangu eyakhiwe. Ngobuchwepheshe obuyingqayizivele nobusezingeni eliphakeme, ubuso be-aluminium be-composite bushelelezi, buhlanzekile futhi bukhombisa phezulu, nge-GB8624-2006 njengezinga lokuhlola.
Aluminium Ucwecwe Camera fiberglass Indwangu
I-Aluminium Foil Coated fiberglass Cloth yenziwa kakhulu ngamasu akhethekile wokusebenzisa uhlobo olukhethekile lwesibopho sokuvimbela umlilo esakhiwe kulwelwesi oluminyene, inendawo ebushelelezi nokukhanya okuphezulu okukhanyayo namandla okuqina, amandla wokubeka uphawu okuhle, futhi kungukuqinisekisa igesi, nokuvimba amanzi.
Indwangu ye-Aluminium fiberglass
Indwangu ye-Aluminium fiberglass isivikelo esiphelele semishini yokumboza esondelene kakhulu nemithombo ekhazimulayo enjengama-slabs ensimbi ashisayo, izinsimbi eziwuketshezi noma ezincibilikisiwe noma ingilazi, ilangabi / iplasma evulekile noma izinqwaba zokukhipha injini. Kuvikela izintambo zezimboni, ikhebula, i-hose, ama-hydraulic kanye namakhabethe wezinsiza kanye nokuvalelwa.
Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized yenziwe ngezindwangu ze-fiberglass ezinamathele ucwecwe lwe-aluminium noma ifilimu ngakolunye uhlangothi. Iyakwazi ukumelana nokushisa okukhazimulayo, futhi inendawo ebushelelezi, amandla aphakeme, ukubukeka okuhle okukhanyayo, ukuvala uphawu, ukufakazela igesi nobufakazi bamanzi. Ubukhulu bama-aluminium foil busuka ku-7micro kuye kuma-25 micro.
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized,